अब यसरी मात्र नेपालीले खोप लाउन पाउछन,पढ्नुहोस – Dainiki Online
May 17, 2021 May 17, 2021 adminLeaveaComment on अब यसरी मात्र नेपालीले खोप लाउन पाउछन,पढ्नुहोस
डा. दिग्विजय महत
मोडर्नाको कोभ्याक्स विभिन्न देशका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा विश्वकै ठूलो खोप खरीद एवं आपूर्ति अभियान हो, यसले नेपाल जस्ता विपन्न देशलाई खोपको पहुँच बढाउँछ। तर, दुर्भाग्य के छ भने, यो सुविधाको कार्यान्वयन तत्काल हुँदैन, लामो समय कुर्नुपर्छ।
मोडर्नाले खोप बिक्री गर्दा सम्बन्धित देशको आर्थिक अवस्था हेरेर मूल्य निर्धारण गर्छ। नेपाललाई सीधै खोप बिक्री गर्दा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने हुँदा अहिलेको अवस्थामा धनी देशलाई वा कोभ्याक्स जस्ता पहलकदमीलाई खोप बिक्री गर्दा बढी लाभ हुन्छ।
(डा. महत अमेरिकाको मासाचुसेट्स इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) मा क्यान्सर सम्बन्धी अनुसन्धान वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत छन्। उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)